28 / 07 / 2021 28 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 836 Views စာ0မှတ်ချက် 18 +, ၇၅၃၀၈ R75308-D2, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, 75313 ကို AT-AT, Instagram ကို, Lego, Lego ကောလာဟလများ, Lego Star Wars, ကောလာဟလာ, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, UCS, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
ကောလဟာလအတွက်အလားအလာရှိသောဖြန့်ချိမည့်ရက်ပေါ်ပေါက်လာသည် Lego Star Wars Ultimate စုဆောင်းစီးရီး 75313 ကို AT-AT.
၂၀၂၁ တွင်နောက်ထွက်မည့်ဒုတိယ UCS စနစ်ဖြစ်သည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship စိတ်မကောင်းပါဘူး ၇၅၃၀၈ R75308-D2 - အ Lego မင်းကမင်းပဲ၊ စံ 18+ သတ်မှတ်ထားသည်) ကောလဟာလတွေ ရှည်လျားတယ်။ 75313 ကို AT-AT နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်မှာ စင်ပေါ်ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒီနှစ်မှာတော့ ပိုလူသိများတဲ့ ရက်စွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Black ကသောကြာနေ့.
၎င်းသည် Instagram သုံးစွဲသူ၏အဆိုအရဖြစ်သည် lego_club_newsသူသည်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်ပမာဏမှာ ၆,၇၈၂ ဒေါ်လာနှင့်ဒေါ်လာ ၇၉၉.၉၉ တန်ဖိုးရှိသည်ဟုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသော ၀ င်ကြေးဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်ပြန်ရမည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Lego Group ၏အထင်ရှားဆုံး Star Wars UCS သည်ယနေ့အထိသတ်မှတ်သည်။
အခြားဘာမျှမရှိပါက UCS AT-AT သည်သူတို့တွင်နေရာတစ်ခုနှင့်ထိုက်တန်သည် Lego Star Warsအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်၏ထိပ်တန်းအဆင့်တွင်ခြေလေးချောင်းပါလမ်းလျှောက်သူကကြီးကြီးမားမားကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ဟုတ်လား Lego အဖွဲ့သည်၎င်းကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ရန် (သို့) trans-clear beams ကဲ့သို့သောပြင်ပအထောက်အပံ့များလိုအပ်သည်ကိုမြင်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်တန်း, veracity ဤကောလဟာလ၏ - သို့သော်ပေးထားသည် မူလကပေါ်ထွက် ဒီနွေရာသီရဲ့လှိုင်းလုံးများနှင့်အတူအားလုံးနီးပါးစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြသောသတင်းများနှင့်အတူ, st ဖို့အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်art ဒီဟာက AT-AT ရဲ့နှစ်ပဲလို့ယုံတယ်။ နိုဝင်ဘာလသည်ဝေးလွန်းသည်။
← နှင့်ထပ်မံသတ်မှတ်ထားသည် LEGO လက်လွတ်မသွားပါနှင့် Brick Fanatics'' စတော့ရှယ်ယာသတိပေးချက်များ
LEGO တွင်အသေးစိတ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား →